The Thijs H. PsyOp ghaghị imebi nzuzo nzuzo na nke ahụ emeworị taa: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 June 2019	• 8 Comments
Ọ na-esiri gị ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị iche iche nke psychological (PsyOps) nke ị na-efe ugbu a. Ana m ekwuputala na ihe ndị dịka Anne Faber kwesịrị iduga na ntinye ngwa ngwa 'ọchụchọ'. Taa, anyị na-ahụ mmeghe nke ngwa ahụ nke mgbasa ozi na-akwalite; ebe ha ka gbanwere aha 'Sherlock', ka onye na-agụ ya mgbe Googling na ngwa ahụ anaghị agwụ na website nke Martin Vrijland wee hụ na e zubere ya niile ogologo oge.
A na-eji arụmụka nke psychological (PsyOps) mee oge na oge ọzọ ịme ka iwu na iwu dị ọhụrụ. Ngwa dị otú ahụ dị ka ọ bara uru, mana n'eziokwu ọ na-eme ikpe ziri ezi na ọkara Netherlands bụghị naanị onye nwere ike inyocha, ma na-enyekwa gị ikike iji igwefoto gị, igwe okwu na ọnọdụ gị, ka i wee nwee ike ịkwado onwe gị.
N'isiokwu m site na 29 na May gara aga, edepụtara m mkpirikpi nchịkọta nke otu ikpe mkpegbu ndị a na-adị na nso nso a kwesịrị iduga iwu na iwu ndị ọhụrụ. Naanị gụọ ha ọzọ (ebe a). Ebuola m ọkwa na iwebata ngwa ahụ na 18 December 2017 ka. N'ezie, n'ime ihe ndị ahụ nile, ihe m buru n'amụma emezuwo, mana o yiri ka hypnosis nke mgbasa ozi dị ike nke na ọ dịghịzi mkpa ma ị na-ekpughe eziokwu ahụ; ndị mmadụ anaghị achọ ịnụ ma ọ bụ hụ ya.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eme ka anyị na ahụ ọkụ ọzọ na - efu (Anja Schaap), ka anyị wee budata ngwa ọhụrụ ahụ. Ọzọkwa ịchọ otu pyromaniac na Gouda, nwere ike inyere aka na ngosipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ahụ. Ee, n'ezie, anyị na-ahụ ihe osise ọzọ nke efu efu Anja Schaap na ọkụ ndị dị adị, ma olee mgbe ndị mmadụ ga-amalite na-aghọta na anyị na-egwuri egwu na nsogbu ndị e mepụtara; ihe ndi mmadu ji kpoo mmadu n'onwu n'onwe ya bu ihe eji emeputa ihe ndi ozo site na usoro onyonyo (site na ngwangwa ndi di mfe) dika 'ihe omimi'?
Na ngwanrọ mfe-na-download ị nwere ike ịmepụta onye na-abụghị onye dị adị ma mepụta otu akụkọ ihe mere eme; gụnyere ihe ngosi vidio, foto yana gụnyere ndị enyi na ndị enyi ndị a na-agbapụkwa n'ime ndụ site na usoro ndị miri emi (pịa na njikọ a ma hụ otú nke ahụ si arụ ọrụ). Onye na-ekiri TV ma ọ bụ onye ọrụ Facebook ga-eche na ọ ga-ahụ ihe oyiyi ndị yiri ka ọ dị elu. Ya mere, i nwere ike ime ka ndị mmadụ banye n'ọnọdụ a nabatara maka iwu ọhụrụ. Nke ahụ kwesịrị mgbalị ahụ.
Dika ekwuru ya, ekwuputala m na 29 May na ihe nzuzo nke ndi okachamara ga-emebi. Taa, anyị na-agụ na de Telegraaf:
N'izu gara aga, ụlọikpe dị na Limburg kpebiri na Mondrian kwesịrị ịkekọrịta foto foto nke Thijs H. na ndị isi ikpe maka nyocha ọzọ. Ụlọọgwụ ahụ achọghị ịnye ihe oyiyi na mbụ n'ihi nzuzo nzuzo. Ma ọkàikpe ahụ kwuru na ihe ùgwù a kwesịrị ime ka ọ dị mkpa ịchọta eziokwu ahụ. "M ghọtara na OM chọrọ ịhụ ihe oyiyi ahụ ma mee mkpebi nke ụlọikpe maka ọkwa."
Otu ọkàiwu nke na-eche na ụlọ iwu nke ụlọ akwụkwọ ahụ emebiela iwu ahụ? Nke ahụ bụ ihe ọzọ na-egosi na anyị na-emeso ikpe ikpe ebere ọzọ. Na mbụ na Jos Brech ikpe anyị hụrụ otú onye ọka iwu Gerald Roethof kwetara na-enweghị mmegide na DNA nwetara na-efu efu e ji mee ihe na Nicky Verstappen ikpe (eze enweghị igbu ọchụ, n'ihi na ọ dịghị ihe àmà maka igbu ọchụ). N'ebe ahụ kwa, e mebiri iwu ahụ n'enweghị nsogbu. Nke a bụ naanị na ọ bụ naanị nabatara ya, n'ihi na arụmụrụ uche dị otú ahụ agbatịwo maka nzube ahụ: imeghari iwu nke ga-ejikarị anabataghị ya. Na ndị ọkàiwu na-ahụ maka ezi uche na-ahụ maka ndị ọkachamara, bụ ndị na-eme ka ha ghara imebi iwu, ihe niile ị ga - eme bụ ime ka iwu ọhụrụ bụrụ iwu ọhụrụ ma emechaa.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: rtlnieuws.nl, rtlnieuws.nl, nieuwsopbeeld.nl, telegraaf.nl
Tags: ọkàiwu, Anja, Anne, ngwa, nzuzo nzuzo, Faber, agba, H., psyop, ọnụ, Atụrụ, Sherlock, Thijs, efu, ihe ùgwù iwu, achọta eziokwu, iwu, nyocha
3 June 2019 na 13: 19
Ị mara ha ... mmeghachi omume ndị a na mgbasa ozi ọha na eze site n'aka ndị na-asị na ha maara onye protagonist ahụ. Nke ahụ bụ otú o si arụ ọrụ. A na-eleba anya na ndị ọrụ mgbasaozi na-elekọta mmadụ mgbasa ozi: ndị na-aga ịkpọsa na ha maara ndị mmadụ.
Ka anyị doo anya: ị nweghị ike ịlele ọhụụ mgbasa ozi ọhaneze iji hụ ma ha bụ ndị mmadụ. Ọ bụ ezie na ha nwere ndepụta enyi maọbụ nwee mmasị na foto / vidiyo ha; n'agbanyeghị na ha nwere foto nke ezinụlọ, vidiyo, foto site n'oge gara aga, wdg. Ihe niile a nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na ngwanrọ. Nke a bụ awa ole na ole maka ndị na-ewu ụlọ. Ndị enyi, ụmụaka, ndị nne na nna, wdg nwekwara ike ịnweta miri na / ma ọ bụ Inoffizieller Mitarbeiter (obodo trolls).
Ya mere enweghi ike iwere ihe ndi ozo banyere mgbasa ozi nke ndi mmadu, nani n'ihi oru ozo na o bu ihe omuma nke nyocha nke ndi mmadu site na profaịlụ na / ma obu Inoffizieller Mitarbeiter.
3 June 2019 na 13: 29
Ee ee na "Anọ m na-eso gị ruo ọtụtụ afọ" bụ okwu mmeghe nke usoro nchebe ndị mmụọ
3 June 2019 na 14: 21
Ọ bụrụ na onye ọka iwu na-ekwu na ọ nabatara ọkwa ahụ site n'ụlọikpe maka ọkwa, ọ pụtara na ọ gaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụ ya mere ọ nabata ya maka ọkwa na agaghịzi adị.
3 June 2019 na 14: 34
Ee, nke ahụ bụkwa ihe m na-agbalị ime ka o doo anya.
3 June 2019 na 18: 06
Ah, ị banyere Gouda, nke ahụ bụ obodo kandụl 🙂
Ihe na-egbu na agbapụta ụgbọ ala ahụ dị nso na-azọpụta n'oge ọ bụla. Enwunye ọkụ niile bụ ọkụ ọ bụla, a ga-emenyụkwa ya naanị oge tupu agbanye ọkụ ma ọ bụ ụgbọ ala na-ere ọkụ, ọ na-achịkwa ya, na-ekwu, na-echekwa ya? 😉
3 June 2019 na 18: 15
Oh, ọ bụghị ọkụ ọ bụla n'otu ụgbọ ala ebe a, otu ugbọ ụgbọ ala fọrọ nke nta ka ọ gwụ. enweghị egwu, ihe anyị kwesịrị ime
eme nke ahụ iji gbochie nke a na-eme ruo mgbe ebighị ebi?
3 June 2019 na 19: 52
Etuwo ihe niile na fim ahụ bụ Circle. Ọ bụghị akụkọ sayensị, kama iji mee ka ndị mmadụ jiri ya na-atọ ụtọ. Ana m ekwu nke a ebe m hụrụ ihe nkiri ahụ.
3 June 2019 na 19: 53
Ana m ekwu ngwa ngwa.
" Ihe egwu egwu nke Marco Borsato na Kuip na Rotterdam!
Anja Schaap na-efu ugbu a pụtara a PsyOp? Lee ihe mere (video) »
Nleta nile: 15.839.731